Blockchain News 25.05.2018 - Blockchain News
Chivabvu 25, 2018 arun
Mike Novogratz: US Govment feya Bitcoin chinhu chakanaka
Billionaire investor Mike Novogratz akati kwete kushamiswa ne mhosva uye anogamuchira kuferefeta, imwe pfungwa chakadzokororwa Cameron Winklevoss, president crypto Exchange Gemini. chikuru nzombe Bitcoin Wall Street kuti akarumbidza Kutama sezvo kutanga inodiwa pamutemo dzokutarisira.
"Kubvisa vatambi zvakaipa chinhu chakanaka, kwete chinhu chakaipa nokuda hutano musika,"Novogratz, uyo akamumutsira cryptocurrency mushambadzi kubhengi Galaxy Digital LP, akati bvunzurudzo. "Zvakawanda exchanges vane inflated vhoriyamu nhamba idzi kusika zvimwe pfungwa kufara kumativi Mari," akati, achitaura zvakaitika kuedza kutengeserana.
"Tinogamuchira chero wobvunzisisa inotarisira kuti pave nemitemo anotsanangura mumisika uye kuita vatambi zvakaipa,"Winklevoss, purezidhendi Gemini Exchange, akati mutsara.
Kraken anokumbira Bush Kutarisirwa muchuchisi sezvo vakawanda zano
San Francisco anotsanangura cryptocurrency Exchange Kraken vakazvitsvakira vaimbova yeUnited muchuchisi akagadzwa President George W. Bush kushumira sezvo vakawanda zano raro.
Business Insider inoshuma kuti adzikinure, worusere pakukura munyika ane zuva Vhoriyamu chete pasi $350 miriyoni, vakazvitsvakira Mary Beth Buchanan, mukadzi wokutanga uye gotwe-peri munhu akagadzwa US Gweta nokuda Western District of Pennsylvania.
20% kuti masangano zvemari kufunga crypto zvokutengeserana mabasa mu 2018 maererano Reuters ongororo
Ontario kwakavakirwa zvemari mashoko akasimba Thomson Reuters akasunungura Ongororo zvabuda kuratidza kufarira cryptocurrency pamusika.
Thomson Reuters vakaongororwa 400+ vatengi uye akawana kuti mumwe-cheshanu wavo vari kuronga kupa cryptocurrency zvokutengeserana mabasa neinotevera 12 mwedzi, nokuda kuwedzera kwenhamba zvikumbiro kubva vatengesi, riri "rakakura kuchinja."
Chainalysis - boka kuti akaparadza kusazivana Bitcoin
Kazhinji dzakabudirira Co ...
Binance Invests $ 10M Into Bermuda Crypto Program
Binance anoronga kuisa ...
Previous Post:Blockchain News 24.05.2018
Next Post:Blockchain News 26.05.2018
rebajas pronovias anoti:
Chikumi 10, 2018 pa 1:25 PM
Ndatenda! Good post!
Chikumi 19, 2018 arun
History wokutanga cryptocurrency